Bayaan aan dhamays tirnayn oo afar sanadood ka hor la soo saray oo ku saabsanaa wax soo saarka iyo tayada caanaha ayaan wali la ansaxinin - ዜና ከምንጩ
Waxa wargayska addiis maleda uu waramay machadka horumarinta warshadaha wax soo saarka caanaha iyo hilibka ee itoobiya oo sheegay in aan wali la ansaxinin bayaankii afar sano ka hor la soo saaray ee aan dhamays tirnayn ee ku saabsana tayada wax soo saarka caanaha iyo suuq gaynta oo loogu talo galay si dhibatooyinkaasi loogu xaliyo.
Guud ahaan dalka caanaha la soo saaro sanadkii hawshooda laga bilaabo xiliga lo’oda laga lisayo , isku dubaridkooda iyo tayao aadka uu hosaysa ee laga arkay dhinaca caanah iyo suuq gayntooda ayaa waxa la qorsheeyay in xal loogu smeeyo oo looguna sameeyo nidaam sharciyaysan, waxaana loo soo diyaariyay bayaan aan dhamays tirnayn. in kasta oo lagu talo jiray sanadkan aan ku jirno ee 2014ka rubuc sanadeedkaka in la soo hor dhigo goolaha wasiirada hadana ila iyo hada looma soo ban dhigin sida uu arintani ugu sheegay wargayska maareeyaha machadka horumarinta warshadaha canaha iyo hiibka ee itoobiya Dhebele Lama.
Waxa uu yidhi waxa ay arintani dhacday xiligii dawlada cusub la dhisayay oo xafiisyada qaar la isku geeyay oo arintaasina ay dib uu dhacday. Xafiiska horumarinta warshada canaha iyo hilibka ee itoobiya waxa uu hore hoos iman jiray wasarada ganacsiga iyo warshadaha, xiligan xaadirka ahna waxa lagu wareejiyay wasarada beeraha waxaana ay caqabad ku noqotay sidii bayaankaasi loo ansaxin lahaa. Xiliga soo socdana xalada dalka ka jirta awgeed marka bayaanka barlamaanka la soo hor dhigo kadib inta loo gudbinayo gudiga arimaha sharciga oo la ansaxinayo lana dhaqan galinayo waxa ay ku qaadan kartaa bilo.
Waxa kale oo uu sheegay in ilaa iyo xiligan xaadirka ah dhibatadii ka jirtay tayada wax soo saarka caanaha iyo suuq gaynta ay sababeen in aanu jirin sharci dilaaliinta dhaxda ku jirta ka saarya oo wax soo saarayasha iyo kuwa ka faaidaysta si toos ah si ay uu wada kulmaan ka yeelaya awgeed.xiliyada soo socdase madaama uu bayaanku uu awood siinayo si ay wax soo saarayaashu iyo kuwa ka faaidaysta in si toos ah ay uu wada kulmaan, waxa la filaya in uu dhibatadaasi xal uu samayn doono.
Waxa la sheegay in afartii sanadood ee la soo dhaafay bayaankan aan dhamayska tirnayn ay ka wada xajooden wax soo saarayaasha caanaha, kuwa isku habeeya, deeganada iyo cida ay khusayso arintani. Bayaankana waxa soo saaray machadka horumarinta warshadaha canaha iyo hilibka oo la kaashanaya wasarada ganacsiga iyo warshadaha, waxa sida oo kale la sheegay in ay qayb ka soo diyaarisay bayaankan ann dhamayska tirnayn wasarada beerahu.
Waxa la sheegay oo kale in bayaankani uu xaqiijinayo hab socodka canaha laga bilaabo xiliga la lisayo ilaa xiliga la isku dubaridayo, cidii geeynaysay meelaha loo baahan yahay, alaabada lagu qaaday iyo cidii ka qayb qadanaysa hawshaasi. Sida oo kale waxa uu bayankani uu soo saaraya qiimo goan. Waxana la baadhaya wax kasta oo caanaha ku jira. Sidaasi darteedna cidii canaha biyo ku darta, cidii inta ay jerikaano ku shubaan xafadaha dhaxdooda la wareega ee ku iibisa iyo guud ahaan cidii ku xad gudubta sharciga in bayaanku uu sameeyay ganaax lagu ganaaxayo.
Sida uu sheegay mareeyuhu in arinta ugu muhiimsan ee soo diyaarinta bayyaanku uu yahay sidii xalka loogu yeeli lahaa tayada iyo suuqa canaha. Sida oo kale waxa uu ka dhigaya in cid kasta ay sharciga uu hogaansato oo hadhawtona loogu dabogali karom cidii inta ay soo dhax gasho ee sida ay doonto ka yeeshana suuqa laga saari karo.
Waxa uu intaasi raaciyay mareeyuhu in la xaliyo dhibatooyinka ka jira wax soo saarka tayada canaha iyo suuqa ee itoobiya ka sakoow in kor loo qaado wax soo saarka caanaha ee dalka in loo baahanyahay . waxa kale oo uu cadeeyay in ka dal ahaan caanihi loo bahna in sanadkii la soo saaro aan la soo saarin. Waxana arintan ay ka danbaysay in halka litir ee canaha ah lagu iibiyo 50 ilaa 60 bir, tayada caanaha oo hosaysana uu qiimahaasi yahay mid aan ku haboonayn. Xoolo dhaqatada, beero layda iyo kuwa si gaar ah ugu hawlan wax soo saarka canahaba sida lagu ogaaday darasaadkii lagu sameeyay sanadkiiba, waxa dalka itoobiya wax soo saarka canuhu ee sanadkii uu yahay 4.2 bilyoon oo litir, marka 120 milyoon oo qof loo qaybiyo sanadkii waxa calaa qof uu isticmaala 20 ilaa 30 litir oo caano ah sanadkiiba taasina waa mid aad uu hosaysa.
Waxa uu sheegay si dhibatooyinkan loo xaliyo waa in lo’oda noceeda la badalo oo lo;oda dibadaha inta lagu talaaalo lo’oda oo la badiyo loona baahan yahay in sidii lagu badin lahaa nooca lo’oda labada litir ee canaha ah markiiba laga liso. Waxa la sheegay in xiligan xaadirka ah uu dalka itoobiya soomaaliya iyo jabuuti uu dhoofiyo canaha geela, si la isigu dheeli tiro baahida loo qabo canaha ee dalkana dibadaha laga soo dhoofiyo sanad wlba caano daqiiq ah oo malaayin ton ah madaama wax soo saarka caanaha iyo baahida loo qabo aanay isku dheeli tirnayn.
Total views : 7512193